isiko Oriental is hhayi okucatshangelwayo exotic yingxenye yokuphila abaMhlophe. ikhishi UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki, Interiors Chic izingubo yaqashelwa indoda emgwaqweni. Ozinikezele kakhulu lathathwa ubuhle zaseMpumalanga, kodwa endaweni ekhethekile kukhona ibhulukwe ububanzi. Kusukela sizogqokani le nto, musa njalo ukuqonda, ngisho nakho ekukhalipheni fashion yabesifazane.
Bloomers unenye, igama fabulous ngaphezulu - Aladdin. Ziyakwazi kakade zonyaka eziningana bahlale bemazi e wochwepheshe imfashini, futhi ngokuvamile ngesisekelo amaqoqo zabo. Kulesi sihloko thina ukuzama ukuqonda ukuthi yini izinhlobo Aladdin, ngawo ukuhlanganisa kubo bese ababashisela Site.
Igama elithi "isithembu" kufikile isiRashiya we zezigodi Turkic futhi translation kahle elula - "ibhulukwe". Bloomers - akuyona into ezingavamile enjalo, futhi ngezinye izikhathi behamba beniyingxenye imvunulo yesizwe bezizwe eziningi. Nezingubo, efana ibhulukwe yesimanje, esigqokwa ngisho amasosha Russian. Futhi abameleli Don Cossacks futhi manje uqhosha ibhulukwe nemfashini.
Eqinisweni, ibhulukwe kukhona ibhulukwe, kodwa ebanzi kakhulu. Indwangu akubalulekile, kodwa ngokuvamile ithungwe ngezinto ezithambile noma usilika. Ziyisivikelo kwenzekani gum esindayo phansi trouser-imilenze agcinwa ikakhulukazi sezinsini. Umehluko omkhulu phakathi ibhulukwe empumalanga - trouser umlenze division, umugqa okuyinto ngempela ongaphakeme maqondana ibhulukwe zakudala.
Kukhona onobuhle lapho umugqa ngokuhlukana ezingeni cishe iqakala. Ngokuvamile kuyinto esizwe ngokuthi "bloomers." Kusukela sizogqokani lokhu izingubo engavamile, abakwazi ukuqonda okuningi.
Ngesisekelo kuphela omunye ibhulukwe ungakha ezihlukahlukene izithombe. Ngaphezu kwalokho, isimo lapho lokhu kufaneleka ukugqoka, futhi ziyahlukahluka:
Ngenxa yokuthi kukhona voluminous kakhulu ezansi, phezulu Kunconywa ukuba ukhethe owufanelekela. Lezi elula izikibha kanye ithangi eziqongweni lehlukene tibalulekile kakhulu. Futhi uma ibhulukwe ne ukuphrinta, phezulu idinga ezinombala ofanayo, noHezekeli.
Ngokuba kusihlwa ezipholile kanye ibhulukwe efanelekayo abesifazane. Kusukela lokho ukugqoka kwabo uma iyathwalwa aphume Tacna? Fit owufanelekela jacket, ijezi obucayi mncane futhi nemfashini jini ihembe.
Uma phezulu kuyinto longish ke, ukuze ugweme ukuminyana yesithombe, wochwepheshe ukuncoma ukugcwalisa engxenyeni engenhla wezigqoko ibhulukwe.
Slacks kuthiwa ehambisana empumalanga ubuhle futhi inganekwane. Ngakho-ke, i-choice izicathulo zingagxila lesi sithombe. Kusukela sizogqokani ibhulukwe, futhi kuncike ukukhula abesifazane:
Ngakho, amantombazane ongaphakeme kungaba zigqokiswe ngokuphepha izimbadada nge izithende, kanye abesifazane ubude uyovele sibheke ballet emaxhaphozini amateki.
ibhulukwe engenangqondo ngemibala egqamile ephelele sishaywe romantic, bona okuhlangana ngayo shales ukhululekile.
cut okuqinile kanye amathoni amnyama ibhulukwe yizicukuthwane igqoke nge enkantolo izicathulo classical nge izithende.
pick up imihlobiso
Naphezu kweqiniso bona ngokwabo ibhulukwe kukhona umthamo ngokwanele, kutuswa imigexo esikhulu ahlotshiswe. Engingakusho nje kokukhumbula ubuhle zaseMpumalanga, futhi kanye ekhanda ozokhula isithombe. Kuzoba eziningi namasongo sihle, ubuhlalu egqamile futhi namacici enkulu.
Ukukhetha isigodlo ibhulukwe ukugqoka nabo esikhathini esizayo, kufanele ucabangele ngokushesha. Uma kungekho imigexo owawubonisa isibindi, kufanele uthole ezimbalwa namasongo, imigexo ukuthenga embondelene. Kuzoba ezihilelekile uchungechunge emhlabeni iqakala yakhe.
Ubani ongafaka ukugqoka ibhulukwe
Ngenxa uhlobo ibhulukwe cut ingase ifanelane owesifazane nanoma yimuphi umthethosisekelo. Kodwa kwaba ukubukeka engavamile kunomphumela ekabili. Ngakolunye uhlangothi, le ndwangu ngakuthathu efihla zonke engadingekile, ngakolunye uhlangothi - unezela ethile ukuma.
Ngalokho khethani ibhulukwe kufanele, inikezwe izici sibalo. Uma imilenze, ngokusho owesifazane, aziyona indawo enhle, imodeli Kungcono iqakala. Kulabo abasebenza ukufihla lwesisu, ungakwazi ziphakamisa isitayela ebanzi nokunwebeka band. Ladies izinkalo besiyoba sikhulu futhi ngokuvamile khetha ibhulukwe.
Kusukela lokho ukugqoka kwabo kuncike Usayizi webele. Lapho isithunzi onohlonze kungcono ukuze unciphise neminye isikibha, ihembe romantic kufanelekile amavolumu encane.
Naphezu kweqiniso lokuthi imodeli asicimi ka catwalks emhlabeni, wochwepheshe namanje musa batusa ukuthola ibhulukwe voluminous kakhulu amantombazane efanele futhi abagada abe ukuma ngesimo ipheya.
Ukukhetha Imithetho breech
Nanka amanye amathiphu ngokukhetha ibhulukwe:
Indwangu. Indaba inenani elikhulu. Ngenxa yokuthi inkathi esikhulu salokhu ingubo - kodwa ehlobo, Kungcono ukuhlala kwezicubu zemvelo. Ukotini, usilika nelineni efanelekayo abesifazane nanoma yimuphi Imizimba. Awu bheka ibhulukwe kusukela ijezi usentekenteke, kodwa le nto kuyadingeka ukuze ugweme izintokazi egcwele. Chiffon kanye viscose kuzokusiza ukwakha isithombe nenhle futhi ayehamba ephathini.
Phrinta Indwangu. Ngosizo umdwebo, awukwazi kuphela ukunikeza kwemizwa yesithombe, kodwa futhi alungise kwamaphutha izibalo. Wochwepheshe ukunikela ukulandela umthetho ukuthi amavolumu onohlonze ngaphezulu intokazi, ezincane kufanele kube ukuphrinta. sibalo Major ukulingana amantombazane mncane.
Usayizi trouser umlenze. On ukudayiswa ungathola umlenze egcwele, lathinta ithole, futhi mfushane. abesifazane imfashini kufanele uqaphele ukuthi inguqulo yakamuva ye-Visual ukuntshontsha ngamasentimitha ambalwa yokukhula, ngakho abagada abakwazi ukuqhosha izinyawo ubude, kufanele kugwenywe. Trendy 7/8 obuphelele ulingana noma abesifazane, kodwa lezi ibhulukwe Kunconywa ukuhlanganisa izicathulo ne izithende.
Sifuna umfanekiso omuhle
Ukuze ehlobo sihambahamba kudingekile ukukhetha ukuthi ulondoloza ibhulukwe wenza izindwangu zemvelo nokukhanya. Kuhlaba umxhwele ngokukhethekile ukubukeka ibhulukwe ukuthi abe sebuningini emphethweni, kodwa ngenxa nje ngisahlose we indaba kuyiphi ithungwe, akazange ukulimaza sibalo.
Ngaphambi kokuthenga okufanele uyicabangele, sizogqokani ibhulukwe. Izithombe abekwe ngezansi, lokho kuyinkomba yokuthi leyompahla ikhambi elingcono kakhulu kasilika ihembe noma phezulu avulekile.
Ukuze uya ephathini ayidingekile ukuthenga ingubo. Yena impela ngeke kungaqashelwa, uma kuziwa iholidi ku ibhulukwe. Futhi ukubaluleka ekuhlanganiseni impahla. Kuyafaneleka ukuba ukhethe into ye yizicukuthwane velvet nenhle noma satin, kodwa Umbala iyadingeka ukuba ezinombala ofanayo.
Zothando isithombe kungadalwa aphume ibhulukwe lakhe, wenza izindwangu agqamile ukuphrinta anombala ocwazimulayo izokwengeza touch of ngesisa. Okungenzeka ukusebenzisa imigexo esikhulu ahlotshiswe.
A ezihlukahlukene ongakhetha
Lowo yakudala isitayela ezibanzi nokunwebeka band. Le dress muhle kakhulu, ngoba kufihla extra esiswini umgodi futhi kwenza umugqa hip eziyengayo ngaphezulu. Kusukela sizogqokani ibhulukwe ibhulukwe, akakubangeli izinkinga uma ukhetha isitayela esisebenzayo. Ambience phansi kumelwe silinganiswe ngumuntu phezulu elula. Plain isikibha, phezulu noma ihembe kuyinto kwalokho okuhle isitayela empumalanga.
Inketho nge short trouser umlenze kudinga indlela ezingcono. Uma ayethanda ibhulukwe iDemo ukugqoka nabo, kubalulekile ukucabanga kusengaphambili. Kufanele kuqashelwe ukuthi isitayela kuyinto ekahle amantombazane eside-ezinemilenze, ngoba imodeli uyazifihla amasentimitha sokukhula. Ngaphezu kwalokho, abesifazane abangakwazi ukuziqhayisa okhalweni olubanzi, engcono futhi ukulahla umlenze mfushane.
Kodwa ngokuvamile, lokhu isitayela ngempela esiwusizo futhi ethandwa. Okubalulekile, musa ukugqoka eziqongweni omcane sibalo zibukeke usike futhi nakakhulu ukusenza sibe sifushane izikhwebu nalo. ihembe ivulekile, romantic wathungela ihembe noma Cardigan khulula kungaba kwalokho ezinhle.